အကောင်းဆုံးက Google Cardboard apps များ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » 10 အကောင်းဆုံးက Google Cardboard ကိုအကောင်းဆုံး VR အတွေ့အကြုံအတွက် apps!
10 အကောင်းဆုံးက Google Cardboard ကိုအကောင်းဆုံး VR အတွေ့အကြုံအတွက် apps! APK ကို
ထွန်းသစ်စနည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူ VR လာမည့်ကြီးမားသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ကြောင့်ဒီအကြောင်းပြချက်မှအများအပြားဦးဆောင်နည်းပညာအမှတ်တံဆိပ် Oculus Rift, Play Station VR, နှင့် HTC Vive ကဲ့သို့နောက်ဆုံးပေါ် VR နားကြပ်နှင့်အတူရှေ့သို့ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Google ၏ Cardboard ရှေ့ဆက်ထိုသူအပေါင်းတို့၏နေဆဲ၎င်း၏တတ်နိုင်ကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျနည်းနည်းနဲ့လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကျော်ကဤ gadgets များထဲမှကောက်ဖို့စီမံကြလျှင်, သင်ကျိန်းသေသည့်အံ့သြဖွယ် VR အတွေ့အကြုံကိုရဖို့အကောင်းဆုံးက Google Cardboard apps များအချို့ကိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အဲဒီမှာအထဲက apps အများအပြား VR ထဲက Google ကနေ့ခင်းအိပ်မက်တစ်နည်းနည်းနဲ့များအတွက်စျေးကွက်ဦးဆောင်ထားပါတယ် Android အတွက် VR apps များ။ ကျနော်တို့ကအကြီးအတှေ့အကွုံမြားအတှကျအကောငျးဆုံးက Google Cardboard Apps ကပစာရင်းဝင်ပြီ။
အကောင်းဆုံးကို google ကတ်ထူပြား apps များအကြား, သင်သည်ဤအံ့သြဖွယ်သောဗီဒီယိုကစားသမားနှင့်အတူအတှေ့အကွုံကိုကြည့်ကာမယုံနိုင်စရာ 2D နှင့် 3D ရုပ်ရှင်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင်၏ Google Cardboard အဘို့သင့်ကို virtual ရုပ်ရှင်ရုံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်လုပ်ရတဲ့မပါဘဲ 180 ဒီဂရီနှင့် 360 ဒီဂရီကဗီဒီယိုကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ app လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှု features များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
ဒါကွောငျ့ကယ့်ကိုချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သည်။ ဒီ app ကိုအနိုင်နိုင်ဆိုပြဿနာများကိုရှိပါတယ်။ developer များအစဉ်အမြဲ Cardboard ပြဇာတ်ရုံအသစ်မွမ်းမံမှုများထွက်လှိမ့်ချလိုက်လို့ပဲ။
ဒါဟာ Android အတွက် VR ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နှိပ်ခြင်းအပေါ်ပျော်စရာတွေအများကြီးဖြည့်စွက်ထားတဲ့အခြားအကြီးအ VR app ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်မဆိုအကောင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးစတင်ရန်စိတ်ဖိစီးမှုဘာမှလုပ်ဖို့မရှိကြပါဘူး။ ဒါဟာအံ့သြလောက်အောင်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံဒီ app ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့ရှိသည်။ သငျသညျဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စတင်ခဲ့ရနျလိုအပျအားလုံး။
ဒါဟာအလွန်လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်။ သင်ပထမဦးဆုံးအနည်းငယ် VR ဓါတ်ပုံတွေကိုနှိပ်ခြင်းအားအတွက်ဒုက္ခကိုရှာဖွေပေမည်။ သငျသညျအကျွမ်းတဝင်ရတစ်ချိန်ကဒါပေမဲ့အဲဒါကိုသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူဖြစ်လာသည်။
ကောင်းပြီ, သငျသညျကွိုးစားရပါမယ်ပထမဦးဆုံး VR app ကို Google က Cardboard ၏တရားဝင် App ကိုထက်အခြားအဘယ်သူမျှဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်အသုံးပြုသူမှစင်ကြယ်သော Cardboard အတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ သင်ကစက်ပစ္စည်းတွင်သိုလှောင်ထားသောသင်၏အ photospheres, ဗီဒီယိုများ, နှင့်အခြား VR အကြောင်းအရာထွက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အသစ်သောအမှုအရာရှာဖွေခြင်း VR ဂိမ်းများနှင့် app များကို၎င်း၏ကြီးမားသောစာကြည့်တိုက်နှင့်အတူဒါပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှသိရသည်။ ထို့ကြောင့်, Google က Cardboard app ကိုတကယ်ကဆိုလိုသောအရာကိုပါဘူး။
Google ကလေ့လာရေးခရီး တစ်ဦးစာသင်ခန်း setting ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောပျော်စရာပညာရေးဆိုင်ရာ app ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလုနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ကမကြိုက်ဘူးဒီ app ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီ app ကကမ်းလှမ်း 200 လေ့လာရေးခရီးသွားကျော်ကိုစွဲလန်းနှစ်သက် Get ။ အတော်ကြာအထင်ကရအဆောက်အ, နေရာများ, waterscapes, landforms နှင့် 360 ဒီဂရီ mode ကိုအခြားနေရာများ၏ဝန်ထုတ်စစ်ဆေးပါ။
ဒီ app ကအရမ်းအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသည်နှင့်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းသောပြဿနာကတစ်ခါတစ်ရံဆက်သွယ်မှုအမှားများနှင့်အတူဆကျဆံသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Google Maps ကိုတစ်ဦးအဟောင်းယခင်, Google က Street View ရုံ VR ထောက်ခံမှုထည့်သွင်းဖို့ updated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောအထင်ကရအဆောက်အ, လိပ်စာများ, လမ်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဒေသများ၏အသုံးပြုသူများ 360 ဒီဂရီအမြင်များပေးခွငျးအားဖွငျ့ကယ့်ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ VR update ကိုပြီးတဲ့နောက် Google က Cardboard အပေါငျးတို့သ VR အကြောင်းအရာထွက်စစျဆေးဖို့တောင်ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှု add သို့မဟုတ်ဤ app ကိုအပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူရဲ့ဖန်တီးမှုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ Google က Street View နည်းလမ်းအသစ်ဟာကမ္ဘာ့ပူဇော်နှင့်တွေ့ကြုံခံစားရန်ရှိပြီးအဘယ်အရာကိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ VR app ထဲမှာ, သငျသညျတခုအပြန်အလှန်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံရှိသည်နိုင်ပါတယ်။ Trinus Cardboard VR အလွန်ကောင်းစွာကယ့်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်။ အားလုံးသင် Google Cardboard အတွက်သင့်ဖုန်းနှင့် PC ကိုနှစ်ဦးစလုံးမှ Trinus ချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်။ သငျသညျတခုစွဲငြိဖွယ်ရာ VR ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ Cardboard စတိုင်, controller စနှင့်အခြားသူများအများစု VR ဟက်ထောက်ခံပါတယ်။
ဒီ app အချို့ bug တွေရှိနေသော်လည်းတစ်ခုချင်းစီကို update ကိုအလွန်တည်ငြိမ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျက၎င်း၏အဆင့်ကိုက်ညီနိုင်မအရာအားလုံးထက်မတှေ့နိုငျပါသညျ။ သင်တစ်ဦးအမာခံဂိမ်းတွေဟာဆိုပါကသင့်လက်ရှိဂိမ်းစုဆောင်းခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာအဆင့်မြှင့် skip မှကွီးတတ်နိုင်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ VR ထောကျပံ့ပေးမထားတဲ့ဂိမ်း, အဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဆဲတစ်ဦး VR ပတ်ဝန်းကျင်၌သင်တို့၏အပြားကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်သောသူတို့ကိုဂိမ်းကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။
ဤသည် VR app ကိုနည်းနည်းပညာရေးဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ VR နဲ့ AR ရှုထောင့်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူက Google Cardboard ထောက်ခံပါတယ်။ သငျသညျသစ်တစ်ခုခုသင်ယူကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုထုတ်စစ်ဆေးနှင့်အတော်ကြာ animations တွေကိုနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ 2D နှင့် 3D animations တွေကိုတစ်ကျယ်ပြန့်စုဆောင်းခြင်း, ဆိုလိုသည်မှာဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ2သန်းမော်ဒယ်များရှိပါတယ်။
Sketchfab တကယ်က Google Cardboard အပေါ်အလွန်အသုံး app ကိုကျင့်သောအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ် bug တွေရှိနေသော်လည်းနေဆဲအလွန်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသည်နှင့်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာ VR Navigation များအတွက်အခြားအကြီးအပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ရှာတွေ့ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ကိုဖြတ်ပြီး VR အကြောင်းအရာဝန်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဆိုလိုသည်။ Fulldive VR ယင်း၏ In-built VR ကစားသမား, Youtube, နှင့် VR browser ကနေ VR အကြောင်းအရာထောက်ခံပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်း VR ပုံရိပ်တွေကိုဖမ်းယူနှင့်၎င်း၏ကြင်နာပိုဂိမ်းနှင့် apps များအတွက် browse ရန်၎င်း၏ဓာတ်ပုံကိုပြခန်း, ကင်မရာနှင့်စျေးကွက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီ app ကို download လုပ်ပါနှင့်သင်ကြိုးစားသင့်ကိုအကောင်းဆုံး VR app များအနက်မှအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သူသည်ဤလူကြိုက်များသည်ဗီဒီယို streaming များဧရာမအကြောင်းကိုသိကြဘဲနေရသနည်း လူအများစုမသိကြပါကြောင်းအရာတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ် YouTube ကို ထို့အပြင်အကောင်းဆုံး VR apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ web ပေါ်မှာ VR အကြောင်းအရာကြီးမားတဲ့စာကြည့်တိုက်ပါရှိပါတယ်။ သငျသညျပညာရေးမှဖျော်ဖြေရေးနီးပါးဘာမှ stream မှ YouTube ချန်နယ်နှင့်ဗီဒီယိုများ၏ဝန်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
YouTube ကိုကျိန်းသေသငျသညျအထဲကစစ်ဆေးနေရကျိုးနပ်သည်အရာကြီးမြတ်ပစ္စည်းပစ္စယ၏ကြီးမားသောအကွာအဝေး, ရှာတှေ့နိုငျရှိရာအနည်းငယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဒီ app ဟာအေးမြရဲ့ features အများစုကိုနှင့်အတူအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအခြို့သောအပိုပစ္စည်းပစ္စယ get နဲ့ YouTube နီဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစနောက်ခံနားထောင်ခြင်းနိုင်ပါတယ်။
VLC က VR အတွေ့အကြုံကိုမှကြွလာသောအခါနောက်တစ်နေ့တွေဟာလည်းတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မည်သည့် VR features တွေရှိခြင်းမှကြွလာသောအခါ၎င်းသည်နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် beta ကိုဗားရှင်း VR အကြောင်းအရာထောကျပံ့ပေးပါဘူး။ သငျသညျကို Google Play တွင်အခမဲ့ VLC ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အဓိက app ကိုအချိန်မရွေးအဲဒါကို related အင်္ဂါရပ်အားလုံးရနိုင်သည်။
ယေဘုယျအား VLC အားလုံးနီးပါးဗီဒီယိုနှင့်ဂီတပုံစံများကိုထောက်ပံ့သောအလွန်ကြီးစွာသော video player တစ်ခုကိုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအစ URL ကိုနှင့်အတူတိုက်ရိုက်စီးကစားနှင့် DVD ကိုက ISO ဖိုင်များကိုပါဝင်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်သင်သည်လက်ရှိတွင်၎င်း၏ beta ကိုဗားရှင်းနှင့်၎င်း၏ 360 ဗီဒီယိုအင်္ဂါရပ်မှထွက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့နှင့် download လုပ်ရန်စာသားအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်, ဒီမှာအကြီးအ VR အတွေ့အကြုံကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးက Google Cardboard Apps ကပတချို့၏စာရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ဘာမှလွဲချော်ထင်ရှိလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ကမှတ်ချက်အပိုင်းအတွက်သိစေပါ။
Cardboard များအတွက် VR ပြဇာတ်ရုံ
အကောင်းဆုံးက Google Cardboard ဟာ android apps များ အကောင်းဆုံးက Google Cardboard apps များ Google က Cardboard apps များ